SandP, Munyori paIndaneti Inotenderera India- Mutambo Wakafambisa Bhubaneswar - 91-993.702.7574 - Peji 7 ye7
The Cultural Extravaganza 'Magha Mela' inopera
Chiitiko chakakura chechikamu chemaMahima chinowanzozivikanwa se'Magha Mela 'chinonziwo' Joranda Mela ', chakasarudzwa pamukuru wayo wepasi rose mu Odisha Joranda muDhenkanal. Chimiro chechipiri chinowanzoita kuti vanhu vanobva kumativi akasiyana eOdhaisha uye vanozvipira kubva kumativi akasiyana eIndia uye kunyanya kubva kuAsam, Andhra Pradesh uye Chhattisgarh [...]
Odisha iri kumabvazuva kweIndia nyika pamwe neBay de Bengal. Iyo inozivikanwa se nyika yehupenzi, mhizha, mabhuku, kutamba, nemimhanzi. Uyewo, inozikamwa nokuda kwemadzitateguru ayo uye temberi dzekare dzechiHindu. Vanhu veOdhiisha vave vachiratidza chido chavo chekugadzirisa mumhando dzose. Munguva yechando, Odisha [...]
Posted In: Indoorfamba
Kutsvaga mazano ekufambisa iyi yechando, asi unoda kushanya kune imwe nzvimbo inofadza? Sandwende Pevhu 'Winter Tour Odisha Package ndiyo yose yaunoda. Yakagadzwa seKashmir yeOdisha, Daringbadi sango rakasviba uye mvura zhinji ine mvura inokurudzira vanoda vanhu. Yakazara nemapako, makungwa nemakomo Satkosia Tiger kuchengetwa ndiyo nzvimbo yakanakisisa ye [...]